Impacts of Corporal Punishment – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on6July 2010 18 October 2010 Categories Discussion, Parenting, Reproduction
17 thoughts on “Impacts of Corporal Punishment”
6 July 2010 at 11:21 am
ရိုက်(နှက် ကို မထည့်ချင်ဘူး)ဆုံးမခြင်းကို အခြေ အနေနဲ့ အချိန်အခါ အရ ပြုလုပ်သင့်တယ် လို့ ထင်မိတယ်။ ရိုက်တယ် ဆိုတဲ့ အခါမှာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ ဒေါသကို ထွက်ပေါက်ပေးသလို မလုပ်ပဲ ဆုံးမတယ် ဆိုတဲ့ အပြုသဘောမျိုး လုပ်သင့်တယ်။ ဆုံးမခြင်းတွေက အနုနည်း၊ အကြမ်းနည်း နည်းမျိုးစုံ ရှိတဲ့ အထဲမှာ အခြေ အနေ အချိန်အခါအရ သင့်တော်တာကို ပြုလုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်မိတယ်။ နောက်…မိဘ ဆိုတာ ကိုယ့် သားသမီး တွေရဲ့ စိတ်တွေကို များသောအားဖြင့် သိကြတဲ့ သူတွေပဲ၊ ကိုယ့် သားသမီးနဲ့ သင့်တော်တဲ့ နည်းနဲ့ ဆုံးမသင့်တယ်။ ရိုက်ဆုံးမခြင်းက မကောင်းဘူးလို့ လုံးလုံး ဆိုလို့ မရဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ အားအားရှိ ထစ်ခနဲဆို ရိုက်နှက်ခြင်းကတော့ မကောင်းဘူးလို့ လုံးဝ ဆိုလို့ရလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ငါးခြောက်ပြားလေးကို လုံခြုံအောင် မထိမ်းသိမ်းနိုင်လို့ အမာရွတ်ထင်အောင် ဆုံးမခံရပေမယ့်လည်း နောက်ဆုံး…ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ သာဓကတွေလည်းရှိပါတယ်။ နှမ်းတစ်ဆုတ်ကို ခိုးစားလို့ ရိုက်ပြီး အဆုံးမ ခံရတာ၊ နောက်… ဘယ်လိုမ မဆုံးမခဲ့လို့ သူခိုး၊ ဓါးပြ ဖြစ်ပြီး အသတ်ခံရတာ၊ သူတောင်းစားဖြစ်သွားတာ စသည်ဖြင့်ပေါ့ သာဓကတွေ ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ ကိုယ့် သားသမီး၊ တပည့်တွေကို အနုနည်းနဲ့ရော၊ အကြမ်းနည်းနဲ့ပါ သင့်တော်သလို ဆုံးမ သင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
6 July 2010 at 11:30 am
ကျွန်တော်က “ထင်တာ”တွေ ရေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သည်စာလေးတစ်ပုဒ်ထွက်ဖို့အတွက် စာအုပ်တွေ အများကြီး ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ သုတေသနတွေနဲ့ အခိုင်အမာ “အတည်ပြု”ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို စုစည်း ထားတာဖြစ်တဲ့အပြင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စစ်တမ်း ကောက်ယူပြီး ကိန်းဂဏန်းနဲ့ ရေးသားထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ငါးခြောက်ပြားလေး လုံခြုံအောင် မထိန်းသိမ်းနိုင်လို့ ရိုက်ဆုံးမလိုက်တော့ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာ၊ ဖြစ်လာတော့ မယားတွေ တစ်သီကြီးယူ၊ ကလေးတွေ တစ်သီကြီးမွေး၊ ဆင်ခြင်တုံတရား ကင်းမဲ့စွာနဲ့ နေလိုက်တော့ မင်းညီမင်းသားကြားမှာ သွေးချောင်းစီး၊ သူက မွေးတဲ့သူလက်ထက်မှာ မြန်မာပြည်ကြီး ဘာဖြစ်သွားတုံး။ ယဉ်ကျေးတဲ့ (တောမကျတဲ့) နိုင်ငံတွေမှာ လူသားကို ရိုက်နှက်ဆုံးမတာ ဝေးစွ၊ ကိုယ်မွေးထားတဲ့ တိရစ္ဆာန်ကို ရိုက်မိရင်တောင် ရဲက ဖမ်းဆီး အရေးယူနိုင်နေပါပြီ။ အဲဒါ တောမကျတာပါ။ ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ နိုင်ငံလို့ မပြောဘူးနော်။ ယဉ်ကျေးတဲ့ (တောမကျတဲ့) နိုင်ငံ civilised nations လို့ ပြောတာပါ။
6 July 2010 at 4:01 pm
ကျွန်တော်ကတော့ စာလေးတွေ ဖတ်ပြီး ထင်တာလေးတွေ ရေး Comment ပေးတာပါ။ ဆရာက ထင်တာတွေ ရေးတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်ထင်တဲ့ ကျွန်တော့ ခံစားချက်လေးတွေပါ။
ဟုတ်ကဲ့..အခု ဆရာ့ Comment ဖတ်ပြီး အတွေးပေါက်တာလေးပါ။ “ငါးခြောက်ပြားလေး လုံခြုံအောင် မထိန်းသိမ်းနိုင်လို့ ရိုက်ဆုံးမလိုက်တော့ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာ၊ ဖြစ်လာတော့ မယားတွေ တစ်သီကြီးယူ၊ ကလေးတွေ တစ်သီကြီးမွေး၊ ဆင်ခြင်တုံတရား ကင်းမဲ့စွာနဲ့ နေလိုက်တော့ မင်းညီမင်းသားကြားမှာ သွေးချောင်းစီး၊ သူက မွေးတဲ့သူလက်ထက်မှာ မြန်မာပြည်ကြီး ဘာဖြစ်သွားတုံး။” သူ့တုန်းက တော့ ဟုတ်တယ်ဗျ။ ဆရာထောက်ပြမ ကျွန်တော်တောင် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ငယ်စဉ်ဘ၀ကို လေ့လာ စူးစမ်းချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာတယ်။
ဆုံးမခြင်းဆိုတာ ကလည်း အနုပညာ တမျိုးပဲဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဆုံးမတဲ့ အခါမှာ အနုနည်းရော၊ အကြမ်းနည်းပါ သင့်တော်သလို သုံးသင့်တယ်လို့ ထင်နေဆဲပဲ။ ဒါပေမယ့် အနုနည်းနဲ့ ပြေငြိမ်းသွားရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။
အခု များသောအားဖြင့် တွေ့နေရတဲ့ မိဘတွေက သားသမီးတွေကို အတိုင်းအဆ မရှိ ထစ်ခနဲဆို ရိုက်တာက ဆုံးမတာ မဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ရဲ့ဒေါသ စိတ်လေးတွေကို ထွက်ပေါက်ပေးလိုက်တာလို့ ထင်မိတယ်။ ဒေါသစိတ် ထွက်ပေါက်ကို သကာရည်ဖုံးပြီး ရိုက်ဆုံမတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တတ်ကြတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ အကြမ်းနည်းကို သုံးရမလဲ၊ ဘယ်အချိန်မှာ အနုနည်းကို သုံးရမလဲ လို့ မေးလာရင်တော့ မဖြေတတ်ဘူးဗျာ။ ပြဿနာတစ်ကို ဖြေရှင်းရာမှာ အနုနည်းနဲ့ အေးအေး ဆေးဆေး ပြေငြိမ်းသွားတာကတော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။
ကို/ ဦး Nd S ရဲ့ comment ကို ကျွန်မ ပြောခွင့်ပြုပါ။
စိတ်ပညာရှင်များကတော့ ကလေးများကို ရိုက်နှိက်အပြစ်ပေးခြင်းကို အားမပေးပါဘူး။
အခုဆိုရင် တချို့ နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် မိဘက သားသမီးကို ရိုက်နှက်အပြစ်ပေးခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းများမှာ ဆရာက ကျောင်းသားကို ရိုက်နှက်အပြစ်ပေးခြင်းတွေဟာ ရာဇဝတ်မှုဖြစ်သွားပါပြီ။ တရားစွဲဆိုလို့ရပါတယ်။
ရိုက်နှက်ဆုံးမခြင်းက ရေတို တခဏသာအတွက်သာပဲ ကောင်းချင်ကောင်းနိုင်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ အင်မတန်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Steven Breckler, JamesOlson, Elizabeth Wiggins တို့ရေးတဲ့ Social Psychology alive စာအုပ်ရဲ့ စာမျက်နှာ ၄၄၃ မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Wayne Weiten ရဲ့ Psycholgy : Themes and Variations (8th Edition)စာအုပ်ကိုလည်း ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
Ellen Pastorino, Susann Doyle Portillo တို့ရေးတဲ့ What is Psychology (2nd Edition)
စာအုပ်မှာ စာမျက်နှာ ၂၂၃ ကိုလည်း ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဆရာမ ဟနစံခင်ဗျား… ကျွန်တော့်ဘက်က လိုသွားတာ ကျမ်းကိုးစာရင်းပါ။ အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရရင် အဲဒီ့စာကို ရေးစဉ်အခါ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်တုန်းက သိပ်ပညာရှင် ဆန်သွားမှာ စိုးလို့ ကျမ်းကိုးစာရင်းကို တမင် ချန်လှပ်ထားခဲ့မိပါတယ်။ အခု ပို့(စ်)မှာတင်တော့လည်း ထည့်ဖို့ စိတ်မကူးမိပါဘူး။ ဆရာ Nd S ပြောလာတော့မှ “စာအုပ်တွေ အများကြီးဖတ်ခဲ့ရပါတယ်”ဆိုတဲ့ စကားကို သုံးဖြစ်သွားတာပါ။ ကျမ်းကိုးကို ပြန်ရှာဖို့ တင်ဖို့လည်း စိတ်ကူးမပေါ်ခဲ့မိပါဘူး။ အခုလို ဆရာမက ကြားကနေ တခြား ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ စာအုပ်များကို စာမျက်နှာ နံပါတ်နဲ့တကွ ၀င်ပြောပေးတဲ့အတွက် အလွန့်အလွန် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
6 July 2010 at 12:07 pm
တိုးတက်အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့ ချင်ကာပူမှာတော့ တရားဝင်ရိုက်နှက်ဆုံးမပေးတဲ့ ကြိမ်ဒဏ် ဆိုတာကြီးရှိတယ်လေ။
ဆရာမ ပန်ဒိုရာ ခင်ဗျား… ဆရာ Nd S အတွက် ကျွန်တော့် ပြန်ကြားချက်မှာ “ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ နိုင်ငံလို့ မပြောဘူးနော်။ ယဉ်ကျေးတဲ့ (တောမကျတဲ့) နိုင်ငံ civilised nations လို့ ပြောတာပါ”လို့ အတိအလင်း ရေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘက်က အဲဒီ့ စာသားကို bold လုပ်ဖို့ လိုသွားပါတယ်။ ဆရာမရဲ့ “ချင်ကာပူ”ကို သိနေတဲ့အတွက် အဲဒီ့စာသားကို သေချာ ရေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ သူတို့ထက် ဆယ်နှစ်ကျော် စောပြီး လွတ်လပ်ရေး ယူခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာတောင်မှ “လူ့သိက္ခာ သေးသိမ်ညှိုးနွမ်းစေသော ပြစ်ဒဏ်မျိုး မပေးရ”ဆိုတာကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ အဆက်ဆက်မှာ အတိအလင်း ပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့ပါတယ်။ အဲတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ သူတို့လောက် မဖွံ့ဖြိုး မတိုးတက်သေးပေမယ့် ယဉ်ကျေးတဲ့ (တောမကျတဲ့) နေရာမှာ သူတို့ထက် သာတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ် ဆရာမခင်ဗျား။
6 July 2010 at 4:29 pm
ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ.။ ဒါကြောင့် တိုးတက်အောင်မြင် လို့ပဲ ပြောလိုက်တာပါ။
ဆရာ့ရှင်းလင်းချက် မိုက်တယ်ဗျ။ သူတို့ကို စကားနိုင်လုရင် မင်းတို့က ဖွံ့ဖြိုး ပေမယ့် ယဉ်ကျေးမှု နည်းသေးတယ် လို့ပြောရမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဖွံ့ဖြိုးခြင်း (development) နဲ့ ယဉ်ကျေးခြင်း (civilization) ဟာ မတူတာနှစ်ခုဖြစ်ပြီး အဲဒီနှစ်ခုအကြား ဆက်စပ်မှု(correlation) နည်းတယ် သို့မဟုတ် မရှိဘူး လို့ ဆိုလိုသွားမယ်နော်။
6 July 2010 at 5:44 pm
ဆရာမ ပန်ဒိုရာတို့ကတော့ ထပ်လုပ်လိုက်ပြန်ပြီ။ ပြောရင် ဆုံးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်။ ကျွန်တော်က ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (development)ကို မေးခွန်းထုတ်နေမိတာ ကြာပြီ ဆရာမရေ။ Is development really good? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေးမိတဲ့အခါတိုင်း လူက စိတ်နောက်ချင်သလို ဖြစ်နေခဲ့တာ ကြာပြီ။ အခုအချိန်မှာတော့ No! လို့ ထအော်မိမယ် ထင်တယ်။ (ကျွန်တော်ကပဲ အူကြောင်ကြောင် တွေးတတ်လို့လားတော့ မသိဘူး။) ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကနေ့ပဲ တစ်ပုဒ်ရေးထားပါတယ်။ ဂျာနယ်ကို မပေးရသေးလို့ ဘလော့(ဂ်)မှာ မတင်ဖြစ်သေးတာပါ။ အလွယ်ဆုံး ပြောရရင် ဆရာမရယ်… ကျွန်တော်တို့တွေ ရုပ်မြင်သံကြား ကြည့်နိုင်လာတာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ညတိုင်ကျရင် မိသားစုတွေဟာ ထမင်းပန်းကန်လေးတွေထဲမှာ ဟင်းတွေပုံ၊ ရုပ်မြင်သံကြားရှေ့ကို ပြေး၊ ကိုယ့်ပါးစပ်ထဲလည်း ဘာတွေ ထည့်နေမိလို့ ထည့်နေမိမှန်း မသိ၊ ကိုယ့်အချင်းချင်းလည်း ဘာစကားမှ မပြောဖြစ်ဘဲ ဆပ်ပြာသည်ဇာတ်တွေထဲမှာ နစ်မျောနေကြတာက အများစု ဖြစ်နေပြီ။ အဲဒါကျတော့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြီးက မထိတ်သာ မလန့်သာရှိလှတယ်။ ဆက်သွယ်မှုတွေ၊ နွေးထွေးမှုတွေကို ဖွံ့ဖြိုးမှုက တစ်တိတစ်တိနဲ့ လှိုက်စားနေသလိုပါပဲ။
ဒါပေသည့် ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနဲ့ ယဉ်ကျေးခြင်းက ဆက်တော့ ကောင်းကောင်းကြီး ဆက်စပ်သဗျ။ ဖိနပ်မစီးဘဲ လယ်ပတ်ကြားအက်မှာ လျှောက်သွားနေတာဟာ မဖွံ့ဖြိုးလို့။ အရှက် လုံရုံလောက်သာ ကွယ်ကာထားတဲ့ ကျောက်ခေတ် လူသားတွေ ဘ၀ကနေ အ၀တ်အစား ၀တ်တတ်လာ၊ ဖိနပ်စီးတတ်လာတာဟာ လူ့ယဉ်ကျေးမှု civilisation ပေါ့။ သို့သော် မဖွံ့ဖြိုးသေးသူများကတော့ အဲလောက်လေးတောင်မှ မယဉ်ကျေးနိုင်သေးဘူး။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်တောင် အိမ်မှာနေရင် ကိုယ်ပေါ်မှာ အင်္ကျီသိပ်ကပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ အမေက ငယ်ငယ်တည်းက ဆူတယ်၊ “တောသားအကျင့်”တဲ့။ (အမေ သိပ်မှန်တာပေါ့။)
စလုံးအကြောင်းတော့ ကျွန်တော် သိပ်မပြောတတ်ဘူး။ ပြောရရင်တော့ စလုံးမှာ ကျွန်တော် မပျော်ဘူး။ နေရတာ မပေ့ါပါးဘူး။ သူ့စာရင် အခုမှ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ဟန်ပြင်စ ကမ္ဘောဒီးယားက Siem Reap ဆိုတဲ့ မြို့သိမ် မြို့ငယ်လေးကမှ အပုံကြီး ပျော်စရာ ကောင်းသေးတယ်။ စလုံးမှာ လူတွေက အကုန်လုံး သန့်လို့၊ ရှင်းလို့၊ ကျော့လို့၊ မော့လို့၊ လတ်ဆတ်လို့။ ဒါပေမယ့် သူတို့ အပြုံးတွေ ဆက်ဆံပုံတွေမှာ အသက် ၀ိဉာဉ် ကင်းမဲ့နေတယ်။ စက်ရုပ်အသစ်ကလေးတွေ လှုပ်နေသလိုပဲ ခံစားရတယ်။ ဆရာမ ပိုသတိထားမိမယ် ထင်ပါတယ်။ စလုံးရဲ့ ပြယုဂ်ကို Clarke’s Quay တို့၊ ယူနီဗာဆယ် စတူဒီယိုတို့မှာ ရှိနေတဲ့ သစ်ပင်တွေက ပြနေတယ်။ တကယ့်လေ၊ တကယ့်မိုးကို မရဘဲ ဇွတ် စိမ်းပြနေရရှာတဲ့ ညိုးလျော်လျော် အပင်တွေ။ အဲဒါဟာ စလုံးသားတွေရဲ့ ဘ၀ကို ထင်ဟပ်နေသလိုပဲ။ စလုံးရဲ့ တိုးတက်အောင်မြင်မှု နောက်ကွယ်မှာ ဖိစီးမှု တစ်ခုက အမှန်ရှိနေတယ် ဆရာမ။ အဲဒါဟာ ဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှ မတူတဲ့ စလုံးရဲ့ ထူးခြားချက်ပါပဲ။ တစ်ကျွန်း၊ တစ်မြို့တည်းက တစ်နိုင်ငံဖြစ်နေ၊ လူဦးရေက ငါးသန်း လောက်ကလေးသာ ရှိနေလျက်ကနဲ့ ရုံးသုံးဘာသာစကား လေးမျိုးဖြစ်နေတာကိုကလည်း စလုံးရဲ့ သူမတူမှုတွေပဲ။ အဲတော့ စလုံးနဲ့ ချိန်ထိုးမယ်ဆိုရင် ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ လူ့ယဉ်ကျေးမှု အဆက်အစပ်ကိုလည်း ဘယ်လို ကောက်ချက်ချရမယ်မှန်းတောင် မသိတော့ဘူး ဆရာမရေ။
ဆရာရေ မူရင်းပို့စ်နဲ့တော့ မဆိုင်ဘူး။ ယဉ်ကျေးမှုက ဖိနပ်တို့ အင်္ကျီတို့နဲ့ ဆိုင်သလားဆိုတာ နည်းနည်း ၀င်လျှာရှည်ပါရစေအုံး။
အိမ်မှာနေရင်း အင်္ကျီမကပ်တဲ့ ဆရာကို တောသားလို့ပြောရင် အခုရက်ပိုင်း ဘိလပ်နေပူပူမှာ အင်္ကျီမကပ်ဘဲ ကျောပြောင်နဲ့ လမ်းသလားနေတဲ့ ဘိလပ်သား နိုင်ငံကြီးသားတွေကို လူရိုင်းလို့ ဆိုမလား၊ တောကျတယ်ပြောမလား၊ ယဉ်ကျေးမှု မရှိဘူး သတ်မှတ်မလားဆရာ။
ဒီကလူတွေ တော်တော်များများ မြက်ခင်းပေါ်မှာ အခင်းမပါ ဘာမပါ တုံးလုံးပက်လက်နေကြ အိပ်ကြတယ်၊ ဖိနပ်လဲ မပါဘူး၊ လျှောက်ပြေးနေကြသေးတယ်။ အလှလုပ်ထားတဲ့ ရေပန်းအောက်မှာ ရေ၀င်ချိုးနေတာလဲ ရှိသေးတယ်။
မြန်မာပြည် ကျေးရွာကလူတယောက် ကျောပြောင်နဲ့နေရင် တောကျတယ်၊ နေပူလို့ ရေအိုင်ထဲ ရေ၀င်စိမ်ရင် ရှုံ့ချချင်မယ်။
အင်္ဂလန်လို နိုင်ငံမျိုးက မျက်နှာဖြူတယောက် အင်္ကျီဗလာနဲ့ နေရင် အမြင်တင့်တယ်မယ်၊ ရေပန်းအောက် ရေ၀င်ချိုးနေရင် လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ အရသာဆိုပြီး ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ discrimination လို့ ကျမကတော့ မြင်တယ်။
အဲလိုသာဆိုရင် ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ ကြီးက ခွဲခြားဘက်လိုက်သလိုပဲ ပေါ့နော် … ပေါ့နော် .. ပေါ့နော် … 😛
7 July 2010 at 11:06 am
ဆရာမ MDW ရဲ့ comment က နောက် အသစ်တစ်ခု ထပ်ပေါ်လာစေပြန်ပါတယ်။
အဲဒါကတော့ အခု အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ရောဂါသစ်တစ်မျိုး ထနေတာပါပဲ။ အဲဒါကတော့ Naturist ဆိုတဲ့ ရောဂါပေါ့။ သဘာ၀၀ါဒီလို့ ဘာသာပြန်ရမလား မသိ။ သူတို့က တုံးလုံးချွတ်ချင်တဲ့အခါ အဲဒီ့ ဝေါဟာရနဲ့ လုပ်နေကြသဗျ။ တုံးလုံးချွတ်လိုမှု ရောဂါက အခု အဲဒီ့တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ အလွန်ခေတ်စားနေပါတယ်။ မာရာဒိုနာကလည်း ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ သူ့အသင်းနိုင်ရင် တုံးလုံးချွတ်ပြီး လမ်းလျှောက်မယ်လို့ ကြုံးဝါး၊ ပါရာဂွိုင်းက မော်ဒယ်မလေးကလည်း သူ့အသင်းနိုင်ရင် ချွတ်ပြမယ်လို့ ကြုံးဝါးခဲ့ကြတာ မကြာသေးပါဘူး၊ ရက်ပိုင်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ဒါက နောက်ထပ် ကာလချာတစ်ခုပေါ့။ တုံးလုံး ကာလချာပါလေ။
2 August 2010 at 12:24 pm
ရိုက်နှက်ဆုံးမခြင်းရဲ့ အကျိုးအပြစ်တွေကို သိပေမယ့်လည်း ၁ နှစ်ခွဲသာရှိသေးတဲ့ ကျနော့်သားကို ရိုက်နှက်ပြီး ဆုံးမဖြစ်နေတယ်ဗျာ… ရိုက်နှက်မိတိုင်း ရိုက်နှက်ပြီးတိုင်း စိတ်မကောင်းပါဘူး….. ဒါပေမယ့် အခြားနည်းလမ်းနဲ့ဆုံးမဖို့ မကြံစည်တတ်ဖြစ်နေတယ်….. ၁ နှစ်ခွဲသာ ရှိသေးတဲ့ကလေးက ဘယ်လိုအပြစ်တွေများ ကျူးလွန်နေသလဲဆိုတော့ လက်ညှိုးလေးထောင်လို့ ဟင်းးးးးးးးး ဆိုပြီး သတိထားဆိုတဲ့ပုံစံ…. လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကို ဆုပ်လို့ လက်သီးဆိုပြီး ပြတာက တစ်မျိုး…. နောက်တစ်နည်းက ကော့ပြတာပါ….. အခြားအပြစ်တွေက…. မီးဖိုချောင်မှာထားတဲ့ ဆားဗူး… အချိုမှုန့်ဗူး… အရောင်တင်မှုန့်ဗူးတွေကို ယူငင်ပြီးဆော့တာပါ။ အဲ့ဒီဗူးတွေထားတဲ့နေရာကလည်း သူလက်လှမ်းမီတဲ့နေရာမှာ ဖြစ်နေတာကိုး…. အခြား လက်လှမ်းမမီတဲ့နေရာမှာထားဖို့ကလည်း လောလောဆယ်မလုပ်ဆောင်ရသေးလို့ပါ…. နောက်လုပ်တဲ့အပြစ်တွေက ဖက်ပြီးကိုက်တာပါ…. အရင်က သူ့အမေကိုပဲ ကိုက်တတ်တာပါ… ဒီနေ့မနက်မှ ကျနော့်ကို ဖက်ကိုက်ပါလေရော သူကတော့ အသဲယားပြီးကိုက်တာ… နောက်ချင်စိတ်နဲ့ကိုက်တာ ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို အပြုအမူမျိုးနောက်မလုပ်ဖို့ ကျနော်ရိုက်ပြီး ဆုံးမမိပါတယ်။ ကိုက်တဲ့အတွက် ရိုက်တာက တစ်ချက်ပါပဲ…. ဒါပေမယ့် ရိုက်လို့ ငိုတဲ့အခါမှာ အသံမထွက်နဲ့ဆိုပြီး ထပ်ရိုက်တာကတော့ သူ မတိတ်မချင်းပေါ့…. တချို့အပြစ်တွေက ပတ်ဝန်းကျင်က သင်ပေးလို့တတ်သွားတဲ့အပြစ်တွေပါ…. ဒါကို ဆက်မလုပ်ဖို့ တားမြစ်ရတာပါ…. လက်သီးဆုပ်ပြတာ…. ကော့ပြတာတွေကို သူ့အမေဘက်က သူ့အဖိုး သင်ပေးလိုက်တာပါ….. သူ့အဖိုးနဲ့ ကျနော်နဲ့က အဆင်မပြေပါဘူး… ခပ်တန်းတန်းနေကြပါတယ်…. သူ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီလိုအပြုအမူမျိုးတွေကို သင်ပေးသလဲတော့ ကျနော်မသိပါဘူး….. သူ့ကိုလည်း ကျနော်ပြောလိုစိတ်မရှိပါဘူး…. ဒါပေမယ့် ကျနော့်သားကိုတော့ အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဖို့ ပထမ တတ်ခါစတုန်းက သား…. အဲ့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးနော်….ဆိုပြီး စကားနဲ့ဆုံးမပါတယ်။ ကိုယ့်ကသာပြောပေမယ့် သူ သေသေချာချာ နားမလည်သေးပါဘူး…. စကားလည်း မပြောတတ်သေးပါဘူး…. အဲ့ဒီလို ပြောလိုမရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ…. ၀ါးခြမ်းပြားလေးနဲ့ ကျနော် ခြိမ်းခြောက်ရပါတော့တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း မလုပ်စေချင်တဲ့အရာတိုင်း ၀ါးခြမ်းပြားလေးကိုင် ကြမ်းပြင်ကိုရိုက်လို့ သတိပေး တားမြစ်ရပါတော့တယ်။ သောက်ရေကို မသောက်ပဲ ပလုပ်ကျင်းသလို ထွေးထုတ်တာ…. သောက်ရေခွက်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုင်သောက်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ အဲ့ဒီလို မလုပ်ဖို့….. ဘာဖြစ်လို့ အဲ့ဒီလို မလုပ်ခိုင်းရတာလဲဆိုတော့ ကျနော် အခုငှားနေတဲ့အိမ်က နှစ်ထပ်အိမ်အပေါ်ထပ်အခန်းမှာ မို့လို့ ရေဖိတ်ကျတဲ့အခါ အောက်ကလူတွေအတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ….. နောက်လုပ်တဲ့အပြစ်တွေက ထမင်းစားတဲ့အခါ ဟင်းခွက်တွေကို လိုက်နှိုက်တတ်တာ…. ဘေးနားမှာလာပြီး အိုးနှင်းခွက်နှင်းဖြစ်တာကတစ်မျိုး…. ဒါတွေအတွက် ၀ါးခြမ်းပြားအားကိုးလို့ ရိုက်နှက်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ…… အခုလို ရိုက်နှက်ခြင်းကြောင့် ဘယ်လိုအပြစ်တွေ ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါပဲ… 😦
23 August 2010 at 2:03 pm
ပင်ကူအိမ်မှတ်တမ်းကို 20.8.10 ကနေ့ဝယ်ယူခဲ့သည်။ဖတ်လို့တော့မပြီးသေးဘူး..ပြီးရင် ပြန်ပြီး
အကြံပြုမယ်..တစ်ခါတုန်းက စာအုပ်နဲ့အတူ CD ပါထည့်မယ်လို့ သိရှိခဲ့သည်။ အဲ အစီစဉ်ဘယ်တော့လောက် ဖြစ်မလဲ သိချင်လိုက်တာ
ဆရာအထောက်တော်လှအောင်ရဲ့ စကားကို ငှားသုံးရရင် “အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းများကို အကြောင်းပြုပြီးသကာလ” စာအုပ်နဲ့ စီဒီတွဲထုတ်မယ့် အစီအစဉ်ကို ယာယီရွှေ့ဆိုင်းထားပါတယ်။ သို့သော် ၂၀၁၁ ထဲမှာတော့ ထုတ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လောလောဆယ် နောက်တစ်အုပ် စီစဉ်နေတာက “ကျွန်းပြန် ပီကင်းပြန် အတ္တကျော်” ဖြစ်ပါတယ်။ နက်ဖြန် သဘက်လောက်မှာ ရုံးတင်ဖြစ်ပါမယ်။ နိုဝင်ဘာလလောက်မှာ ထွက်မယ်လို့ မှန်းဆရပါတယ်ခင်ဗျား။
19 October 2010 at 4:05 am
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ sadist အကြောင်းကို အကျယ်တ၀င့် သိချင်ပါတယ်။ ရှာဖွေဖတ်ကြည့်ဖူးပါတယ်။ လူ့သမိုင်းနဲ့ အမျှရှိခဲ့တာလို့လည်း ထင်ရပါတယ်။ ဒါကို စိတ္တဇတစ်မျိုးလို့ သတ်မှတ်မလားဆရာ။ နောက်ပြီး အဲ့လိုစိတ်ကို ဘယ်လိုကုစားလို့ရနိုင်ပါမလဲ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာ သားသမီးနဲ မိဘ၊ ဆရာနဲ့ တပည့်ကြားက ရိုက်နှက်မှုတွေထက်၊ လင်မယားကြားမှာဖြစ်တတ်တာတွေကို ဦးစားပေးသိချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုဖြစ်မယ့် စိတ်မျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်ဆရာ။ လုံးဝမဖြစ်ချင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်မဖြစ်ချင်ဘဲ ပြင်ချင်ပေမယ့် အဲ့လိုဖြစ်တာကိုနှစ်သက်သလိုဖြစ်နေတယ်။ တစ်ခါမှ တစ်ယောက်ကိုမှ ကိုယ်တွေ့မလုပ်ခဲ့ဖူးပါဘူးဆရာ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အပေါ်အရမ်းကောင်းတဲ့ချစ်သူကိုတော့ သူ အလျော့ပေးတဲ့ကြားက အနိုင်ယူချင်တာတွေနဲ့ အဲ့လိုလုပ်ကြည့်ချင်စိတ်တွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သူကလည်း နားလည်အလျော့ပေးနေလို့ ပိုခက်နေတာပါ။ ဒေါသထွက်မိရင် စဉ်းစားဆင်ခြင်စိတ်နဲ့ ပြေပျောက်လိုက်ချင်ပေမယ့် ချက်ချင်းကိုယ့်ဘက်ကလျော့်လိုက်ရမှာ ခက်ခဲနေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်မနိုင်တဲ့ အားနည်းချက်၊ ပျော့ညံ့မှုလို့တော့ ၀န်ခံပါတယ် ဆရာ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့လိုစိတ်တွေမဖြစ်ချင်တဲ့အပြင် တကယ်ချစ်လို့လက်ထပ်မယ့် အဲ့ဒီမိန်းကလေးအပေါ် အဲ့လို စိတ်ကြောင့် မနစ်နာစေချင်ဘူးဆရာ။
ကျွန်တော့်မိဘကတော့ ကျွန်တော့်ကို မရိုက်ဘူးလို့ပြောရအောင် အရိုက်နည်းပါတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခွင့်လည်းပေးထားပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ရန်တောင်မဖြစ်ဖူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူပျိုဖော်ဝင်စမှာ အပြစ်ပေးတာတွေ အရမ်းကြမ်းတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းကို မိဘရင်ခွင်ကနေပထမဆုံးခွဲပြီး အချိန် အတော်ကြာအောင် ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ ဘ၀အပြောင်းအလဲမှာ ချို့တဲ့ခဲ့တဲ့ဒဏ်နဲ့ပေါင်းပြီး တော်တော်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့မှာ လူတွေနဲ့ မရောချင်တဲ့ သီးသန့်နေချင်တဲ့ စိတ်လည်းဝင်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ထဲကိုမ၀င်ခင်ကတည်းကလည်း အဲ့လို လူတွေနဲ့မရောဘဲ စာဖတ်ပြီးအိမ်မှာကုတ်နေတတ်တဲ့ အကျင့်တော့ရှိပါတယ်ဆရာ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီကိုရောက်မှ ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာက မရောက်ခင်ကနဲ့တော့မတူဘူးဆရာ။ အခုနောက်တော့ နည်းနည်း သက်သာလာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် လုံးဝပုံမှန်လူတွေလိုတော့ လူတိုင်းနဲ့ခင်ချင်တဲ့စိတ်မရှိသေးဘူးဆရာ။ ခင်တဲ့သူတွေနဲ့ဆို စကားတွေ အများကြီးပြောဖြစ်သလောက် ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့ဆို လုံးဝကိုမခင်ပါဘူး။ လူတွေနဲ့ကင်းကင်းနေဖြစ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကိုကော စိတ်ဝေဒနာလို့ပြောလို့ရမလားဆရာ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကျွန်တော်က လိင်ဆက်ဆံမှုကို စိတ်ထက်သန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကိုယ်ရေအာသာဖြေခြင်းမျိုးကို ခဏခဏလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ချိန်မှာ လိင်စိတ်ကိုနိုးထစေတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ များသောအားဖြင့် သာမန်ဆက်ဆံမှုမဟုတ်တဲ့ ရိုက်နှက်ပြီး သာယာမှုယူကြတဲ့ကားတွေကို ကြည့်ပြီးဖြေဖျောက်တာပိုများပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကြောင့်ပဲ အခုလိုဖြစ်နေတာလားဆိုတာကိုလည်း ကူစဉ်းစားပေးပါဦးဆရာ။ အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရင် သဘောကျတတ်တာကကော သဘာဝမကျတဲ့ သာယာမှုလားဆရာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် sadist တစ်ယောက်တော့ အဖြစ်မခံချင်ပါဘူးဆရာ။ မဖြစ်ချင်ရင် ပြင်ပေါ့ ဘာလို့မေးနေသေးလဲဆိုရင် သိရုံနဲ့ပြင်ဖို့ခက်နေလို့ပါ။ အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုကြည့်ရရင် စာတွေကိုဖတ်ရရင် sexual feeling တစ်ခုတော့တစ်ခုပဲ အဲ့ဒါကို ရနေတယ်။ အဲ့ဒါကိုလည်း သဘောကျနေတတ်တယ်ဆရာ။ အဲ့ဒါကိုကောဘယ်လိုပြင်လို့ရနိုင်မလဲဆိုတာ ကျွန်တော့်ကိုအကြံပေးပါဦးဆရာ။ နောက်ပြီး အဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲ စိတ်ဝေဒနာတစ်ခုဆိုရင် ဘယ်လိုကုစားသင့်သလဲဆိုတာကိုလည်း အကြံပေးပါဦးဆရာ။ ကျွန်တော်ပြင်မှာပါ။ အခုချိန်မှာကျွန်တော်က အခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာရောက်နေပါတယ်။ မြန်မာပြည်ပြန်ရင် ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ပြီး သာယာတဲ့မိသားစုဘ၀လေးကို တည်ဆောက်ချင်ပါတယ်။ တရားထိုင်တာမျိုးနဲ့ ပြုပြင်ရင်တော့ ရနိုင်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ရနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုလည်းအကြံပေးပါဦးဆရာ။ ဆရာ့အနေနဲ့ စေတနာနဲ့ အခုလိုအချိန်ကုန်ခံပြီး စာတွေရေးပေးနေချိန်မှာ ကျွန်တော့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက်နဲ့ အချိန်တွေ အများကြီးတောင်းရတာကိုလည်း အားနာမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူနည်းစုအနေနဲ့တော့ အခုလိုအခြေအနေနဲ့ ဆရာတို့မဖြစ်စေချင်တဲ့အမှားတွေကို မှားနေတဲ့လူတစ်စုအတွက် ဆရာ ပြန်ရေးပေးဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ဆရာ။ ဆရာရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာတွေအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ။
Previous Previous post: Consistency and Discipline
Next Next post: For Parents and Teachers to Think Twice